Ciidanka AMISOM oo Qiratay inay sixaasinimo leh 25-Neef oo Geela ah ay ku dishay Shabeellaha Hoose!! | kowtharmedia.com
Home WARAR Ciidanka AMISOM oo Qiratay inay sixaasinimo leh 25-Neef oo Geela ah ay ku dishay Shabeellaha Hoose!!
Ciidanka AMISOM oo Qiratay inay sixaasinimo leh 25-Neef oo Geela ah ay ku dishay Shabeellaha Hoose!!
Afhayeenka AMISOM oo wareysi gaar ah siiyay Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed ee SONNA ayaa sheegay in ciidamadooda ay dileen 25-Neef oo Geel ah 4-kalana ay ku dhaawaceen, xili uu socday dagaal ay kula jireen Al-Shabaab shalay waa siday sheegeen.
Joe Kibet ayaa sheegay in Al-Shabaab weerar Qaraxyo ah ay ku soo qaadeen AMISOM xili ay marayeen deegaan lagu magacaabo Wareer-maleh oo u dhow magaalada Baraawe ee Gobalka Shabeellaha Hoose asagoo sidaas ku marmarsiyooday.
SONNA ayaa waydiisay Kibet inuu jiro khasaaro soo gaaray dadka rayid ah ee ka akdhowaa halka uu dagaalka ka dhacay, laakiin meesha kama uusan saarin arintaas, wuxuuna sheegay inay suurta galtay maadaama dagaalku uu socday mudo.
Ugu Danbayntii wuxuu sheegay Afhayeenka AMISOM inuu haatan socdo kulan ay la leeyihiin maamulka deegaanka iyo sidoo kale dadkii xoolaha lahaa ayna kala xoojoonayaan waxa dhacay.
inta badan Amison markii Askar wax ka gaaraan xanaaq iyo kibir ay kaqaadaan waxay Xabado ku furaan Noolaha Dad iyo Xoolo ee Dalka jooga Soomaaliya.
Previous Postwaxaa halkaan kusoo gudbinaynaa muuqaal ku saabsan sida Dalalka Dadkooda hodanka yihiin ee Caloosha ugu soo dilaan Ubadkooda!! Next PostDaawo : Maamulka Jubaland iyo Odayaasha DHAQANKA oo Taageeray Jawaari, Kana Horyimid C.rashiid Xidig MUUQAAL!!